Faah faahin:- Milkiilaha teleefishinka UNIVERSAL oo shalay lagu xiray magaalada Hargeysa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Milkiilaha teleefishinka UNIVERSAL oo shalay lagu xiray magaalada Hargeysa
Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland ayaa sheegaya in gelinkii dambe shalay halkaasi lagu xiray milkiilaha teleefishinka UNIVERSAL-TV Injineer Axmed Abuubakar.
Wariyaheena ku sugan magaalada Hargeysa ayaa inoo xaqiijiyay xariga Injineer Axmed Abuubakar, wuxuuna sheegay in ciidamada booliska ee maamulka Somaliland ay maalintii shalay xabsiga u taxaabeen, iyadoona illaa iyo haatan aan la ogeyn sababta ka dambeysa xarigiisa.
Xariga Injineer Axmed Abuubakar ayaa loo maleeynayaa inuu la xiriiro barnaamij ka baxa teleefishinka UNIVERSAL ee ah “Faaliyaha Qaranka”, kaas oo laga sii daayo warar aysan jecleeysan oo wax looga sheegayo mas’uuliyiinta Somaliland.
Injineerka ayaa la sheegayaa in xilligii la xiraayay uu ku sugnaa gurigiisa islamarkaana ay halkaasi ka kaxeysteen ciidamada booliska Somaliland, kadibne xabsiga dhigay.
Dhinaca kale, ma jiro wax war ah oo weli kasoo baxay mas’uuliyiinta maamulka Somaliland, kaas oo ay kaga hadlayaan xariga lagula kacay milkiilaha teleefishinka UNIVERSALTV.
Xariga Injineerka ayaa imaanaya xilli dhawaan magaalada Hargeysa lagu xiray majaajiliistaha caanka ah ee Cabdi Muriidi Dheere “Ajakis”, kaas oo kadib loo soo masaafuriyay magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, xariga Injineerka ayaa kusoo beegmaya xilli magaalada Hargeysa ay ku xiran yihiin saxafiyiin badan oo uu ka mid yahay wariyaha caanka ah ee Soomaaliyeed C/maalik Muuse Coldoon.
C/maalik Muuse Coldoon ayaa loo haystaa booqasho uu ku tagay magaalada Muqdisho, kadibne uu halkaasi kula soo kulmay siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.